Buundada Çanakkale 1915 Bridge si ay u noqoto adeegga Maarso 2022 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara17Buundada 'akanakkale 1915 Bridge si ay u noqoto Adeeg Maarso 2022
16 / 05 / 2020 17, GUUD, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEOS
buundada Canakkale waxay gali doontaa adeeg
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ka soo qeybgalay Munaasabad Lagu Dhameynayey Buundada 'Bridge Bridge Completion Creemony' oo lala yeeshay kulan fiidiyow ah oo ay wehelinayaan Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu.
Erdogan iyo Karaismailoğlu ayaa hadal ka jeediyay xafladda dhameystirka mid ka mid ah dhismayaasha buundada.
Nuxurka hadalada ka soo baxay xaflada ayaa ah sida soo socota:
Waxaan rajeyneynaa inaan ilaalin doonno ballanteena ah inaan haysanno buundadan bisha Maarso 2022, waxaan u furi doonnaa adeegga dhammaan Turkiga
Waqtiga dhexe ee 2023 ee buundada ayaa tusaale u ah himilooyinkeena 2023.
Dhismaha buundada ee Çanakkale Strait waa riyada qarniyo badan .. Sida riyooyin badan oo dalkeenna ah, waxay noo ahayd amaanteen inaan ka dhigno mid dhab ah.
Adduunyada loo dejin doono siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba kadib coronavirus-ka, buundadan waxay noo noqon doontaa kaabayaal aad noo muhiim ah.
Hawshan, dhamaan dhismayaasha dhammaan 4ta munaarad ayaa la dhammaystiray marxalad muhiim ahna u ah dhismaha buundada ayaa hadda laga tegey.
Isbitaalka Magaalada Başakşehir II. Bishii Maajo 21-keedii, isaga iyo raysal wasaaraha Japan, Mudane Abe, iyada oo loo sii marayo wadahadal-fiidiyow.
Intii aan waxan wadaynaynay, qayb ay hogaamiso CHP ayaa had iyo jeer isku dayey inay ka hortagto shaqooyinkeenna, inay na soo dhex gasho beenta iyo cayda.
Weerarka kooxda daacada taageera ee Van waa fal argagixiso oo ay ku jiraan xubnaha HDP. Waxqabadka HDP waxaa loo fuliyaa si la mid ah xubnaha CHP. Habka ayaa ka duwan.
Wasiirka Gaadiidka Adil Karaismailoğlu: Maanta waxaan marag u nahay taariikhda. Waxaan qabanqaabineynaa dunuunkii ugu horreeyay ee 1915 Çanakkale Bridge. Adeegga doomaha u dhexeeya Lapseki iyo Gelibolu wuxuu qaadan doonaa 1.5 saacadood buundada, halka uu qaadan doono 6 saacadood. Gawaarida xamuulka iyo rakaabka ee jidadka waaweyni way kordhaan maalin kasta. Buundadu waxay isku xiri doontaa Thrace iyo Gobolka Aegean, waxayna si weyn uga faa iidaysan doontaa suurtagalnimada dhaqaale. Wadada gobolka ayaa lagu soo gaabin doonaa 101 kiiloomitir oo ah wadada weyn oo dhererkeedu yahay 40-kilomitir. 567 milyan TL ayaa la keydin doonaa sanad walba. Sida in kabadan 1000 goobood oo dhismaha ah oo dalka oo dhan ah, waxaan u dhaqmaynaa si waafaqsan mabaadiida caafimaadka marka hore iyo nabadgeliyada shaqada marka hore.
Wakaaladda Wararka ee Hibya
1915 Waddada Canakkale waa la furi doonaa 18 March 2022
Maanta Taariikhda: 18 March 2017 1915 Saldhigga Buundada Canakkale
Maanta taariikhda: 18 Maarso 2017 1915 Buundada Canakkale ...
1915 Waxay Gudbisaa Imtixaanka Dabaysha ee Canakkale Bridge
1915 Go'aaminta degdegga ah ee go'aanka qaadashada ee Chaakkale Bridge
1915 Isku-xirka Shidaalka ee Caanakkale ayaa sii socota
1915 Bridge Chanakkale Bridge wuxuu noqon doonaa kaniisadda 2023